Microsoft Edge ichagadzirisa otomatiki ku "Edgium" nhasi | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Edge ichagadzirisa otomatiki ku "Edgium" nhasi paWindows 10. Hakuna zuva rekuuya kweLinux parizvino
Internet Explorer yaive, kwemakore mazhinji, default browser inoshandiswa neWindows operating system. Yakanga iri bhurawuza ine simba rayo, asi nehumwe hutera hwaitove chikonzero che "meme." Munguva pfupi yapfuura, kambani yeRedmond, pamwe nekuda kwekubuda kwevashandisi kuchinjira kuFirefox uye kunyanya Chrome / Chromium, yakafunga kuvhura Microsoft Edge, bhurawuza nyowani yakasiya kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo, asi izvo zvinogona kuvandudzwa.
Iyo yekutanga vhezheni yeMicrosoft Edge yakashandisa iyo kambani kambani inonzi EdgeHTML, asi muna 2018 vakafunga kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekuenderera mberi nekuvandudza yavo browser yaive kutanga kushandisa iyo Chromium injini, Inoshandiswa nehukuru hwakawanda hwemabhurawuza akakurumbira uye yakavhurika sosi. Uyo anotaurwa mune mamwe midhiya se "Edgium" (Edge + Chromium) anga achiwanikwa mumashanduro ekuyedza kwemwedzi, asi kubva nhasi ichagadziriswa otomatiki mukati Windows 10. Izvo zvichaitawo saizvozvo muWindows 7 uye Windows 8.x.
Microsoft Edge inoenderana neChannel yekuwedzera
Izvo zvakakosha kutaura kuti Edge ichave iri inoenderana zvizere neInternet Explorer, zvinoreva kuti iri kumashure inoenderana (kuchine zvakawanda zvemukati zvinowirirana chete neyakare browser). Kune rimwe divi, zvakare inosanganisira chishandiso chinonzi Unganidzo iyo inotibvumidza kusevha zvemukati senge mifananidzo kana zvinyorwa uye yakarerutsa zvakavanzika mabasa, inowirirana nePWA (Progressive Web Apps), akati wandei ma profiles emushandisi anogona kushandiswa, ine kuverenga modhi, yakasviba modhi uye PDF muoni.
Iyo yekuvandudza ichave otomatiki uye isingadziviriki kune vese vashandisi kunze kweWindows Bhizinesi, ndiani anogona kushandisa chishandiso chinowanikwa pa Iyi link nokuti block kugadzirisa. Tichifunga nezvekuvandudzwa uye kuti kuchave nekudzokerana kumashure, izvozvi handigoni kufunga nezve chero chikonzero chekushandisa chishandiso, asi chiripo kune avo vanochida.
Kana ari Linux vhezheni, Microsoft haina kushandisa iyo nguva kupa rumwe ruzivo, saka isu tinofanirwa kugara nechipikirwa icho ichauya imwe nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Edge ichagadzirisa otomatiki ku "Edgium" nhasi paWindows 10. Hakuna zuva rekuuya kweLinux parizvino
Iyo nyowani vhezheni yeCentOS 8.1 yave kuwanikwa iyo inosanganisira nhau dzeRHEL 8.1